यसरी पटाक्षेप भयो संखुवासभा घटनाका अभियुक्त लोकबहादुरको नाटक | ईमाउण्टेन समाचार
भदौ २७, २०७८ पढ्न १६ मिनेट
काठमाडौं । गत सोमबार बिहान । संखुवासभाको मादी- १ उम्लिङमा एउटा चिच्च्याहट आयो, ‘गुहार ! गुहार !! लोकेले मार्‍यो, गुहार ! मलाई बचाऊ ।’
तेजबहादुरकी ८४ वर्षीय आमा पार्वती कार्की भने घरमै कुँडो पकाइरहेकी थिइन् । घटनाबारे पार्वतीले पनि थाहा पाएको हुन सक्ने भन्दै उनको पनि घरमै गएर हत्या गरे । संयोगवश तेजबहादुरका बुबा बौद्धमान कार्की भने सुतिरहेका कारण बाँच्न सफल भए ।
आँखा राम्रोसँग नदेख्ने र कान पनि नसुन्ने भएका कारण लोकबहादुरले उनलाई घटनाबारे केही थाहा छैन भनेर त्यतिकै छाडिदिए । लोकबहादुरले प्रयोग गरेको चिर्पट कुँडो पकाएको आगोमा जलाइदिए । करिब ८ बजे लोकबहादुरले नै बडाबाको लास देखेको भन्दै अरूलाई खबर गरेका थिए । उनले खबर गरेपछि अरू पनि घटनास्थल पुगे ।
तर, छ जनाको क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएको घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले कुनै उपलब्धि हात पार्न सकेन । जिल्लाको प्रहरीले घटनास्थलको सुरक्षा दिँदै सम्भावित स्थानको निगरानी बढाएर हत्यामा संलग्नको खोजी थालेको थियो ।
संघीय इकाई प्रहरी कार्यालय धरानबाट एसपी भीम दाहाल नेतृत्वको टोली राति मात्र पुग्यो । बृहत् अनुसन्धान भोलिपल्ट बिहान अर्थात् घटना भएको २४ घण्टापछि मात्र सुरु भयो । त्यतिबेलासम्ममा घटनास्थलका धेरै प्रमाणहरू लोप भइसकेका थिए । छ जनाको हत्या भएपछि प्रहरी र स्थानीयको आशंका थियो- पैसाका लागि हत्या गरेको हुन सक्छ । तर, प्रहरी टोलीले खानतलासी गर्दा पैसा र गरगहना घरभित्रै भेटियो ।
संसद् बैठकमा के-के विषयमा छलफल चलिरहेछ ? हेर्नुहोस् … (लाइभ भिडियो)
महिनावारीलाई पाप वा धर्मको रुपमा लिन हुँदैन : मन्त्री मगर